Mhinduro inogoneka ye "Kernel Panics" paArch Linux boot | Kubva kuLinux
Inogoneka mhinduro yeakasarudzika "Kernel Panics" pane Arch Linux bhuti
c4 zvinoputika | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Iyi posvo ndeyekuratidza maitiro "ekugadzirisa" rinenge dambudziko rekutanga pamwe nezvikanganiso Arch Linux. Chinhu chakafanana nemufananidzo unotevera:
Sezvinoonekwa, tinoona kuti iyi ndeimwe yeakawanda "musanganiswa" wemhosho dzinoonekwa zvisina kujairika kana uchitanga sisitimu yekushandisa nedambudziko iri. Sezvazvinotaura mukukanganisa ikoko, zvinoratidza kuti panogona kunge paine dambudziko mu "Hardware", zvisinei, sekuziva kwedu tese muhurongwa hwekushanda, kunyangwe hunyengeri hwakaipa hweicho chisiri cheOS chinogona kugadziriswa.
Saka, ini ndichatsanangura chiitiko changu cheichi dambudziko. Kubva pane zvandakakwanisa kuona, dambudziko raingova ne Arch Linux kana imwe distro yandakayedza kunze, nekuti nechero ubuntu hwandakanga ndaisa kana kuyedza, hwakatanga pasina matambudziko. Asi kana akaedza kubvarura iyo Arch Linux yakaiswa pane hard drive, yaive nedambudziko kuti yaifanira kutangazve kanokwana makumi mashanu kuitira kuti OS ibhure zvakajairika uye igone kuishandisa.
Izvi zvaitova nechakakanganisika neni nekuti ini ndaigona kungoshandisa iyo ubuntu yandaive ndaisa kuyedza uye ndaisakwanisa kuita kana hafu yezvinhu zvandaigona kuita nazvo Arch Linux. Saka ndakafunga kugadzirisa dambudziko iri ndikatanga kuferefeta, ndichitsvaga tambo dzeforamu dzaive nedambudziko rakafanana, vakataura zvakare kuti yaive mhosho yehurdware uye kuti yaive chaiyo CPU, saka zvakatanga kundinetsa, saka Ini ndinofanira kuvhura PC uye ndione kuti chii chaiitika, zvisinei, hazvina kubatsira.
Asi chimwe chinhu chakandiratidza, chandisingafanire kurega ndechekuti kana Ubuntu Ini ndaigona nekuti Arch Linux kwete (pamwe Ubuntu zvirinani pane Arch…?). Saka ini ndakatanga kunyora bhuti paramende kune iyo kernel ye Arch Linux, zvinhu zvakaita se: lapic, nomce, intel_idle.max_cstate = 0, disable_cpu_apic, acpi_skip_timer_override, acpi = stric, clk, apm, noapic, acpi = oldboot, acpi-cpufreq, intel_pstate = regedza, i8042.noacpi = 1, apd = 0 pci = nocrs, rhgb, acpi = simba, pnpacpi = XNUMXff uye nevamwe vazhinji… Zvese izvi zvakakurudzirwa mumaforamu andakaverenga.
Kusvikira ini ndaifanira kuenda kune zvinyorwa zvemakernel parameter, ayo andinokurudzira nenzira: https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
Uye ini ndakawana inonakidza paramende iyo yenguva iyo yandakakwanisa kuboot Arch Linux Hapana dambudziko:
Sezvinoratidzwa ipapo, zvinoitwa neparamende ino kudzora mashandisirwo ecpu pasina kuita iyo symmetric mode yekugadzirisa. Pakutanga zvakashanda mushe kusvika pandakazoshandisa rairo pacman -Syyu; akandikanda a core yakakandwa o segmentation mhosva.
Saka ini ndakangoerekana ndaona kuti chimwe chinhu chisingazivikanwe chaiitika, saka ndakatanga kumhanyisa mamwe maitiro kusvika kamwe kamwe system ikapererwa uye ikasashanda zvekare, kudzamara ndazvimisikidza. Saka ini ndakavhiya zvakafanana, asi panguva ino ndakakwanisa kuita htop uye yakandiratidza zvinotevera:
Sezvaitarisirwa, yakangoratidza imwechete CPU, sezvo imwe yacho yakanga yairemadza, zvisinei, zvaitaridzika kuva zvisinganzwisisike kwandiri kuti nei zvirongwa zvakakanda zvakasarudzika, uye haikwanise kana kutanga iyo graphical nharaunda; saka chaive chinhu chakandipa tariro yakawanda yekuti ndikamisa maparamende enzira imwe nzira yaizovhura yangu Arch Linux senguva dzose.
Saka ndakaramba ndichiyedza mamwe ma parameter andakanyora mune iyo runyorwa kudzamara ndawana iyi, inova mhinduro yakanyanya parizvino:
Iyi paramende inoita chimwe chinhu chakareruka sekuzvipatsanura (kwete kudzima) yechipiri musimboti weCUU mune symmetric kugadzira, ndokuti, mutoro wekugadzirisa unopihwa kune imwechete musimboti imwe ichingowirirana. Izvi, kunyangwe zvichiratidzika kuva zvinopikisana, hazvikanganise mashandiro zvakanyanya, nekuti iyi OS hombe yakakwanisa kumhanyisa mashandiro nenzira iyi:
Saka neizvi, iro chete dambudziko randakaona rinoitika panguva yebhoti, ndeimwe kana maviri kernel panics kana oops; asi ndichienzaniswa nenguva makumi mashanu dzandaifanira kutangazve kare, ndinogona kuzviona se "workaround". Kune vamwe vese, kusvika parizvino zvakandibvumidza kushandisa iyo OS uye kunyora iyi posvo yauri kuverenga izvozvi :-).
Ndinovimba vanokubatsira, uye usazobuda GNU / Linux, inova ndiyo sisitimu yekushanda yakanakisa yavasati vambogadzira. Ndinozvitaura zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Inogoneka mhinduro yeakasarudzika "Kernel Panics" pane Arch Linux bhuti
Gregorio Espadas akadaro
Inonakidza kwazvo info. Ini handisati ndambove neiyo kernel panics muArchLinux mumakore andanga ndichiishandisa, asi zvakanaka kuti uzive zvekuita kana dambudziko rikamboitika kwandiri. Ndatenda!
Pindura kuna Gregorio Espadas
Zvisinei, ndanga ndichishandisa Arch kwenguva yakareba (ini ndaive senge gore rimwe ndisina Arch) uye ndisina kernel panic.
c4 zvinoputika akadaro
Zvingangodaro, sekutaura kwandakaita mupositi, dambudziko rinoitika nekuda kweiyo Hardware, nekuti mune izvo zvandinoshandisa arch, yanga isina kundipa chero dambudziko rerudzi urwu kana.
Imwe ine mhedzisiro yakanaka muArch. Ini handisati ndambove neKernel Panic
Pindura kuna elav
Kupfuura makore maviri neGNU / Linux ... makore maviri atove neArchLinux, haambovhunduki kernel .. 😉
Manuel de la Fuente akadaro
Ini ndinofunga kernel panics inokonzeresa zvakanyanya kune Hardware kupfuura kune iyo distro pachayo. Handisati ndamboona kutya kernel palaptop yandinoshandisa izvozvi kunze kwekunge ndaisa Ubuntu alpha mairi (uye Arch Linux yaive pano kwemakore maviri futi). Kune rimwe divi, mune imwe laptop yandinayo, chero distro yandinoisa inogara ichipa kernel kuvhunduka uye zvakasiyana siyana zvikanganiso pane zvese zvido.
Pindura Manuel de la Fuente
Iine kernel 3.14 paDebian, ndakamhanyira mudambudziko rekutyisa, kunze kwekuti pese pandinovhura PC yangu, ndinowana "batanidza / kubvisa nguva yekubuda" meseji (uyezve pandinoidzima).
Pindura kune eliotime3000
Zvakaitika kwandiri zvakanyanya muFedora seArch, asi ini handizive kuti sei, uye sei pandinoona pasina mutsauko nekuti handina kupedza nguva ndichiongorora kana kugadzirisa izvo (kana riri dambudziko).
Ini ndinofunga chikonzero ndechekuti dzakanyorwa pamwe gcc 4.9
Pindura kune dasasd
Ndatenda kwazvo neruzivo. Zvimwe zvezvinhu zvakawanda zvatinogona kuzvirumbidza pamusoro pazvo ndezverudzi urwu foramu
Nei izvi zvichiitika kune Arch Linux? Zvichida hazvina kukwana nematambudziko anowanzoonekwa nekunonoka kana kurembera kweiyo system kusvika padanho rekukanda iyo system kune kushushikana.
Hei? Uri kutaura nezvei? o_O
Arch igadziriro yeKISS inogadziriswa kubva pasi peiyo inoshanda sisitimu pachayo, mune mashoma mazwi, kana iyo system iri inorema imhaka yekuti iwe wakaivaka nenzira iyoyo, kana iyo system iine zvikanganiso imo nekuti wakazvigadzira ivo kana nekuti iwe hauna kumisikidza chimwe chinhu nenzira kwayo. Arch wiki yakanyatso kukwana, makore mashoma apfuura pakanga pasina misoro yakawanda yakakosha muchiSpanish, izvo uye maitiro ekumisikidza aive akaomarara uye akaomarara, izvozvi zvese zvangoita otomatiki.
Kupomera distro yezvikanganiso zvemushandisi ndizvo… Windows (?).
Kupomera distro yezvikanganiso kuri kuenderana, nekuda kwekuti ichokwadi. Mushure mekuita dambudziko rakafanana neManjaro, ndakaedza Arch, Antergos uye kumwe kuzivikanwa kusingazivikanwe (handikwanise kuyeuka zita iri parizvino, ndine urombo) kuti mumwe munhu akandikurudzira achindisimbisa kuti haina kupa matambudziko, asi hapana; vese vanozvipa. MuOpenSuse, Fedora, Mint, Mageia uye neese andakaedza mumashure haapfuuri. Saka sekufunga kwangu, ini ndakasiiwa ndisina imwe sarudzo asi kufunga kuti imhosva yedistro. Asi, hei, ini handizvidhimoni kana chimwe chinhu, zvinowedzera, zvinonditsamwisa kuti handigone kushandisa chero chinhu zvichibva paArch, nekuti ndinoifarira zvakanyanya, asi iro dambudziko rakanyanya rinonditadzisa. Kana ini handifunge kuti ndezve Hardware, nekuti vazhinji vedu izvo zvinoitika kwatiri hazvina kuitika vasati vashandisa zvakafanana fucking. Zvakanaka, chaizvo chinofanira kunge chiri chimwe chinhu chine hukama neiyo Hardware, asi, kudzokera kuchinhu chimwe chete, kana ndisina kuita shanduko uye ndine matambudziko nemidziyo imwecheteyo yandaive ndisinayo kare, zviri pachena kuti ichave nekuda kweshanduko yakaitwa naArch akandikwenya.
Pindura kuna Dayara
"Kupomera distro zvikanganiso zvemushandisi ndizvo ... Windows (?)."
Ini ndaizokuudza kuti kupomera vashandisi zvikanganiso zvechigadzirwa kwakadaro Apple. Ndakafungisisa nezvazvo kane chiuru, asi ini handioni mukana wekushandisa chimwe chinhu icho vanochengeta vanowacha maoko, chero chinangwa chakakomba. Uye ini ndinoti ndichifunga kuti iyo GPL software inouya isina warandi.
Iwe unogona kutaura sezvaunoda asi kana iri iyo yakafanana nyaya yemishumo yekushaikwa kwechiratidzo kune iyo iPhone uye mhinduro yaApple "ndeyekuti urikuzvikanganisa" kubva makore akati wandei apfuura. Kana iwe ukaita distro iwe unowanzo kuda kupa imwe mhando, uye shoma tsigiro, uye chokwadi ndechekuti Arch ndiyo inonyanya kuita hobbyist system, apo iwe paunoona kuti vanogadzira vayo vanonakidzwa nekurongedza zvinhu zvitsva, asi vasina kana kufarira kufarira kupa rutsigiro rwechokwadi. Nguva dzese pandinoona iyi mhando yekutumira ini ndinokoshesa zvakanyanya iro basa kuseri kwedistro yandinoshandisa.
Uye hongu, iri dambudziko software kana ikasashanda, kana ikamira kushanda mune yekuvandudza, kana kana chimwe chinhu chehardware chaputsika. Iyo imwe kernel panic distro nepo imwe isinga… tsime, ehe, zviri pachena kuti pane imwe distro iri kuita zvinhu nemazvo uye imwe zvisirizvo. Zvino kana chiri mufaro wako kushandisa Linux muchimiro chema90s kwataifanira kudzokorora kernel pese patinopinda muprinta nyowani ... hezvo iwe.
Pindura kune juanfgs
Iyo kernel yakarongedzwa nevagadziri? kana wako?
Kernel panics inogadzirwa kana zvimwe zvinhu zvisati zvasarudzwa (AND) kana zvichinyorwa, kana mamwe ma module asina kuvhurwa kutsigira imwe Hardware. Nemaitiro uye ruzivo rwe Hardware yako (iwe unofanirwa kuvhura iyo pc uye uone kuti ndeapi mabhendi emachipisi ayo ainayo), unogona kuvaka tsika kernel (nekudzima). Kana ubuntu neArch yekumisikidza CD yaive pakombuta yako, pane chimwe chinhu mumusanganiswa chisina kuvhurwa.
Yaive iyo kernel yemasheya kubva kune archlinux pachayo, kubva kunzvimbo dzekuchengetedza.
Iyo kernel yauri kushandisa, pane chimwe chinhu chasara pane iyo yako hardware isingade, iwe unofanirwa kunge uine imwe isingawanzo vhezheni yechip pane yako mamaboardboard kana kunyangwe bug mune chip (zvinowanzoitika).
Inogona kunge iri tafura yakashatiswa yebios acpi yako, zvakajairika kuti maChinese ari pabasa haatomboverenga checksum yetafura yega yega zvakanaka, meseji idzi dzinowanzoonekwa ne $ dmesg -human pakutanga kwebhuti.
Iwe unofanirwa zvakare kuyedza imwe magetsi, kana iyo kusefa ikatadza, iyo ripple inowanzoita irwo rudzi rwekutadza.
Kutanga, edza kushandura font uye uone zvinoitika, kana ikaramba yakadaro, edza kumisikidza kernel yakagadzirirwa iyo yako Hardware, nenzira yauchazoziva yako pc zvirinani mukuita.
Pindura kune asingazivikanwe
Ndatenda nemazano. Nenzira iyo iri laptop, ndinofunga ndinofanira kuchinja bhatiri. Asi ndiri kuona zvawandiudza zvinogona kundibatsira.
Iyo imwe kernel kuvhunduka iyo ichiri kunditenderedza kupenga ingangove imhosva yeiyo nyowani vakomana uye yangu yekare, yechinyakare, uye ine guruva kwazvo nVidia 6150 SE kadhi rakabatanidzwa (ndinoreva pamwe nekuti; ivo vaita basa rakanakisa kutsigira zvakasikwa zvegrafiki machipisi senge iyo iyo nVidia inayo, uye zvese izvi, ichishandisa chete reverse engineering, pamwe nedambudziko rinongoitika kune mamwe makadhi ane NV4E chipset).
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutanga Openbox + Firefox uye nenjodzi inorova (hapana chimwe chakanakisa kupfuura kuona yakazara yakasarudzika nhema uye chena mosaic pane yako skrini). Uye ndanga ndichiimba kubvira kernel 3.6 muDebian, Fedora, Archlinux, Slackware uye zvino ndasimbiswazve muGentoo (ichangoiswa ne kernel 3.12), handichanetseki kutora danda, kune kernel kana kuipa nguva yekunyora chimwe chinhu usave unorova zvisina maturo mavara.
Ini ndinokupa mhinduro, pc yandinayo ine gentoo uye yakasanganiswa nvidia vhidhiyo yakafanana neiyo nyowani mutyairi, saka ndanga ndisina sarudzo asi kushandisa yakavharwa nvidia mutyairi, yangu chip inofanirwa kushandisa iyo 304.123 mutyairi
00: 0d.0 VGA inoenderana controller : NVIDIA Corporation C61 [GeForce 7025 / nForce 630a] [10de: 03d6] (rev a2) (prog-kana 00 [VGA controller])
Iwe unofanirwa kurongedza kernel faira usati warinyora, kana zvisiri zvigamba iyo giraidhi modhi icharamba kutanga.
Tsvaga ne ctrl + w mukati me nano chinyorwa ichi, acpi_os_wait_events_complete uye nano inokuendesa kune ino chikamu:
void acpi_os_wait_events_complete (isina)
Iyo chigamba iwe yaunofanira kuwedzera iyi yekupedzisira tambo iyo inotanga neExpORT, ctrl + kana ctrl + x
Ipapo iwe unounganidza iyo kernel, isa ma module, isa kernel, gadzira iyo initramfs kana uchizvida, wedzera splash kune initramfs kana ukashandisa splash, gadzirisazve zvinyorwa zvegub uye pakupedzisira uye zvakanyanya kukosha, iwe unofanirwa kuvaka zvakare ma module asiri e kernel kana iyo module nvidia module, pasina kuita izvi graphic mode haishande.
# eselect kernel chinyorwa
# eselect kernel seti x
# gadzira modules_install
# kukwira / bhuti
# splash_geninitramfs -verbose -res 1400 × 1050 -append /boot/initramfs-3.15.7-gentoo.img kubuda-nyika
# grub-mkconfig -o / boot/grub/grub.cfg
# kubuda @ module-kuvaka zvakare
# umount / bhuti
# kudzima -r izvozvi
Kana iwe ukashandisa genkernel unongobata iro faira uye ini ndinonzwisisa kuti genkernel inozvigadzirisa pachayo.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kubvisa rutsigiro rwe drm uye madhiraivhidhi e-nvidia uye mamwe mavhidhiyo machipisi kubva kune kernel kuitira kuti arege kurovera musoro neakavharika nvidia mutyairi uyo akaiswa senvidia module.
Panyaya yekushandisa bhutsu, iwe unofanirwa kusanganisira uvesa mutyairi mune kernel kuitira kuti itsigire resolution dzakakwirira kubva pakavhara nvidia mutyairi (kana ndichirangarira nemazvo) haitsigire anopfuura 800 × 600 mune terminal tty1 «F1» yebhutsu.
Ini handizive nezve mamwe ma distros, asi ini ndinofunga inofanirwa kumhanya pane chero distro kana matanho aya akaitwa, kuchengetedza shanduko inobuda yechinhu chipi zvacho.
Aya ndiwo marongero aunofanira kutevedzera, kune nvidia uye uvesa:
Kutenda neruzivo, asi ini ndakagadzirisa dambudziko iri chaizvo nekuchinjisa kune veimba. Ini ndinorangarira kuti yapfuura nVidia mutyairi (304.121) zvakare aifanirwa kuiswa zvigamba paienda ku3.13 nekuti yaive nedambudziko mukuumbwa kwemo module (pakanga pasina zvikanganiso, asi module rakaramba kushanda) uye zvese zvakare nekuda kweACPI chiitiko chinobata. . Muna Debian ndakawana dambudziko ndikawana mhinduro zvakare.
Ini ndashandisa Manjaro semuenzaniso, asi ini ndakambotaura kuti izvo zvakafanana zvakaitika kwandiri neArch nezvimwe zvigadzirwa. Naizvozvo ndinotenda kuti dambudziko iri ravo kupfuura rakakanganiswa.
Pd: Ini handina kukwanisa kupindura zvakananga kune akakodzera meseji nekuti sarudzo yekupindura haina kuoneka ...
Ini ndangoenda kubva kuManjaro kuenda kuLinux Mint nekuti yaizopisa painobhucha mushure mekuvandudza kune imwe vhezheni mushure me0.8.9 (handisi kuyeuka ndeipi). Kubva pane zvandakaverenga, izvi zvinowanzoitika pama laptops. Dambudziko rangu riri mubvunzo rakanga risina kufanana neiri mune ino positi, ndinofunga ndakasvika pamhedziso yekuti inogona kunge iine chekuita nekutonga kwesimba. Kune vanhu vasina kufriza kana vatangisa iyo laptop ivo vasina kuburitsa. Parizvino handirangariri kana izvo zvakandibvumidza kuti ndigare ndichitanga pasina matambudziko, asi hongu ndakakwanisa kuzviita kakawanda pamutengo wekutora nguva yakareba kuti uzviite.
Zvisinei, mukupedzisira ndakasiya ndikachinjira kuFedora neLinux Mint.
Zvakangoitikawo, nezuro ndakaedza kuimisa ndisina charger uye payakatangazve yakaturikwa uye ini ndaifanira kutangazve.
Zvinosetsa, ndanga ndiine Arch kwemwedzi mishoma uye handina kana Kernel Panic imwe chete! Zvakaitika kwandiri neAntergos (Arch ine yakawedzera repositi) kubva kunharaunda irarame, asi ini ndinoona ichinzwisisika ipapo. Chingave chiri chinetso naamai bhodhi kana chisina kukwana RAM module? Ndinoyeuka makore maviri apfuura RAM module yakandikonzera akati wandei mabhuruu ewindows muWindows uye zvakare akati wandei Kernel Panics! paMandriva. Ini ndaifanirwa kuyedza ndangariro yega yega panguva pakati pekutanga zvekare.
Iri dambudziko reArch (iro rinodhonzera zvigadzirwa zvaro zvese), nekuti mune mamwe ma distros hapana matambudziko erudzi irworwo. Chandinoona chinonyadzisa ndechekuti panguva ino havasati vazvigadzirisa. Izvo zvaingova ivo chete kwemakore! Ndakaverenga matambudziko akafanana kubva muna 2011. Ndiri pachena kuti ndechimwe chinhu chinouya uye chichienda sezvavanogadziridza, nekuti kushandisa shanduro 0.8.7, 0.8.8 uye 0.8.9 pasina kuvandudza, hapana chinoitika. Kubva ipapo zvese zvinoenda kushit, uye zvirokwazvo mushanduro dzekare zvakaitika zvakare. Sei zvichiitika kune vashoma vedu? Ini handizive, asi handifunge kuti idambudziko redu, asi Arch, nekuti, sezvatotaurwa, kumwe kugovera kunoshanda zvakakwana. Ndakatotyora nyanga dzangu muzuva rake kutsvaga mhinduro, asi ndakaneta. Saka, kunyangwe ndine hurombo, ini handisi kuzoshandisa Arch.
Arch 0.8.7, 0.8.8 uye 0.8.9? Ini ndoona kuti Arch inoshandisa iyo vhezheni zita remazita.
Zvingave izvo kuti uri kushandisa Manjaro?
Ok ndinozvipindura ndichiverenga yako yapfuura komendi, uye chimwe chinhu Manjaro uye chimwe chiri Arch.
Iko kupomera distro kune rimwe dambudziko hakuenderane chero (kwete kunyatsoenderana), zvirinani kwandiri handigone kupa mhosva mangani distro ini yandinoedza nedambudziko neinova uye yangu nVidia 6150SE kadhi, nekuti dambudziko ndiro MMIO kubata kwemutyairi uye kadhi (iyo nVidia inozoziva zvekugadzirisa uye zvinhu zvekupenga zvavanofanira kugadzirisa iyo tsananguro). Hardware inogona zvakare kunge iri dambudziko, uye iwe unogona kuona kuti mune chero OS yaunoshandisa (Windows, Linux, BSD), uye mune ruzivo rwangu ndichigadzirisa makomputa ndakaona matambudziko asinganzwisisike ehurdware (senge PC inoramba boot kutoti iwe ukachinja nzvimbo yekurangarira, uye kana uchivhara unofanirwa kudzokorora maitiro), uye ini handikwanise kupomera Windows neDebian izvo.
Ini ndaive nekernel panic ine live live 12.04
Pindura kuna raalso7
Ulises Bernal Perez akadaro
Ndine frenetic yangu Yakachengeteka HP pavilion dm4 Notebook PC, 8 GB ye RAM, 500 ye hard drive, ine anopfuura makore mashanu ekushandisa. Ini handirangarire kumhanya kweiyo microprocessor, iyo Intel musimboti i5, ini ndinofunga kupfuura 5 mhz.
Ini handikwanise kunyora chero chinhu pachiratidziro. Ini ndicharamba ndichitsvaga rumwe ruzivo, kugadzirisa dambudziko iri.
Pindura kuna Ulises Bernal Perez
Terminal Chishanu: nzvimbo yenzvimbo yeIP
DWM, mumwe weanoshanda kwazvo windows mamaneja
Black Friday yasvika!
Ona sarudzo yedu ine zvakanakisa zvidzikiso muhunyanzvi
★ ONA ZVINOPIWA ★